I-Costco Returns Policy 2021 ukubuyekezwa nezinto zikhululiwe
Iyini inqubomgomo yokubuyisa i-Costco?
Ungayibuyisa Kanjani Into
Okuhlukile – Izinto Ongakwazi Ukuzibuyisa
Imibuzo evame ukubuzwa mayelana nenqubomgomo yamakhuphoni abuyisa i-Costco
Isiphetho kunqubomgomo ebuyisa i-Costco
Ngabe ukhathazekile ngenqubomgomo yokubuyisa i-Costco? ICostco isebenza ngesiqinisekiso sokwaneliseka esingu-100%, ngakho-ke ungathenga ngokuthula kwengqondo! Uma ungeneme ngobulungu bakho, i-Costco izokhansela futhi ibuyise imali nganoma yisiphi isikhathi. Ungabuyisa nokuthengiswayo kwakho ukuze ubuyiselwe imali, ngokuya ngemigomo nemibandela ku-Costco kubuyisa inqubomgomo.
Uzohlala ulazisa ikhwalithi nenani lemikhiqizo oyithengayo, kepha uma uthola ukuthi akunjalo, uzothola imbuyiselo ephelele, akukho mibuzo ebuzwayo. Uma unganelisekile ngobulungu bakho be-Costco noma okuthengiswayo, bazokubuyisela ngokuphelele kwifomu yakho yokukhokha yasekuqaleni.
Yize kunethuba elihle kakhulu lokuthi uzokuthanda ukuthenga kwakho, i-Costco iyaqonda ukuthi kwesinye isikhathi izinto ziyashintsha. Zizwe ukhululekile ukuletha izinto zakho kwikhawunta yokubuyisa yesitolo sakho sendawo, noma uma u-ode le nto ku-inthanethi, ungaqala ukubuyisa on-line ngokusebenzisa iwebhusayithi yabo.
Umthetho womhlaba uma kukhulunywa ngenqubomgomo yokubuyiselwa kwemali ye-Costco ukuthi ungakwazi ukubuyisa noma yini, nganoma yisiphi isikhathi, akukho mibuzo ebuzwayo – ngaphandle kokulinganiselwe.
Lokho kudlulela ekuthengisweni njengamakhompyutha, omatilasi, ama-TV futhi ubulungu bakho. Ngakho-ke, yebo, ngombono, ungabukhansela ubulungu bakho bese uthola imbuyiselo ephelele kuzinkokhelo zakho zonyaka uma ungajabule nganoma yisiphi isikhathi.
ICostco isebenza ngesiqinisekiso sokwaneliseka esingu-100%, ngakho-ke ungathenga ngokuthula kwengqondo! Uma ungeneme ngobulungu bakho, i-Costco izokhansela futhi ibuyise imali nganoma yisiphi isikhathi. Ungabuyisa nokuthengiswayo kwakho ukuze ubuyiselwe imali, ngokuya ngemigomo nemibandela ku-Costco kubuyisa inqubomgomo.
Kubulungu: Sizokhansela futhi sibuyisele imali yakho yobulungu nganoma yisiphi isikhathi uma unganelisekile.
Okuthengiswayo: Siqinisekisa ukwaneliseka kwakho kuwo wonke umkhiqizo esiwuthengisayo, futhi sizobuyisa inani lakho lokuthenga *, ngokuhlukile okulandelayo:
I-elekthronikhi: Inqubomgomo yokubuyisa i-Costco izokwamukela ukubuyiselwa ezinsukwini ezingama-90 (kusukela ngosuku ilungu elithole ngalo okuthengiswayo) kwamaTelevishini, ama-Projectors, ama-Main Home equipment (amafriji angaphezu kwe-10 cu. ama -washerwashers, ama-heater amanzi, ama-washer kanye nama-dryer), ama-Pc, ama-Touchscreen Tablets, ama-Sensible Watches, ama-Cameras, ama-Aerial Cameras (ama-drones), ama-Camcorder, ama-MP3 gamers nama-Mobile Telephones (imininingwane yokubuyisa izohluka ngenkontileka yesevisi yenethiwekhi).
Abamele abakwaCostco Concierge Providers bethu bayatholakala ukusiza ngosizo lobuchwepheshe kanye nemininingwane yewaranti yemikhiqizo eminingi engenhla. Uzothola uhlu lwezinto ezifanelekile lapha.
Amadayimane: 1.00ct noma ngaphezulu: Amalungu abuyisa idayimane ngaphezu kuka-1.00ct kufanele futhi ethule wonke amaphepha (i-IGI kanye / noma izitifiketi ze-GIA) ngaleso sikhathi azothola i-Jewellery Credit score Memo. Kungakapheli amahora angama-48, i-Costco Graduate Gemologist yethu izohlola ubuqiniso.
Ugwayi notshwala: Inqubomgomo ebuyisa i-Costco ayemukeli ukubuyiselwa kusikilidi noma kotshwala lapho kungavunyelwe khona ngumthetho.
Imikhiqizo enesikhathi sokuphila esiwusizo esilinganiselwe, njengamathayi namabhethri, ingathengiswa ngewaranti ekhawulelwe ethile yomkhiqizo.
Ama-Particular Order Kiosk nezinhlelo ezifakiwe ngokwezifiso: Imikhiqizo (imikhiqizo) yangokwezifiso eyenziwe ekucacisweni komuntu siqu nokuhlukile kwelungu lethu ayikwazi ukubuyiselwa noma ukubuyiselwa imali, ngaphandle kokulungiswa / ukufakwa kwewaranti ngenxa yokwehluleka ukuhlangabezana nemininingwane ethile.
See also ¿Qué son las transferencias ACH? ¿Cómo pueden beneficiarlo? Actualizaciones de 2021
Imikhiqizo ethengwe endaweni ye-Costco idinga ukubuyiselwa ekhawunteni yokubuyisa kunoma iyiphi indawo yokugcina impahla ye-Costco.
Izinto ezi-odiwe ku-inthanethi zingabuyiselwa kunoma iyiphi indawo yokugcina impahla ye-Costco -noma ungaqala a buyela ngeCostco.com.
Izindlela zokukhokha ezamukelwe ziyehluka ku-inthanethi nasendaweni yokugcina impahla. Ngiyacela Chofoza lapha ukuthola uhlu oluphelele lwezinkokhelo ezamukelwe.
* Imikhawulo iyasebenza. Bona ikhawunta yobulungu noma i-Costco.com ngemininingwane.
Izimpahla ezithile ze-elekthronikhi (ezithengwe ngomhlaka noma ngemuva kwawo [Agasti 31st 2020])
Ezimpahla zikagesi, inqubomgomo yokubuyisa iCostco Wholesale yokushintsha umqondo isebenza kuphela ezinsukwini ezingama-90 kusukela osukwini lapho ilungu lithola lezi zimpahla ezilandelayo: amathelevishini, ama-projektha, izinto ezinkulu zasendlini (kufaka phakathi amafriji, amafriji, ama-rangehoods, ama-cooktops, ama-microwaves, ama-washers, ama-washers kanye ama-dryer), amakhompiyutha, amaphilisi wesikrini esithintwayo, amawashi ahlakaniphile, amakhamera, amakhamera asemoyeni (kufaka phakathi ama-drones) amakhamera ezokuphepha, ama-camcorder, ama-MP3 participant, amaselula kanye nama-air conditioner aphathekayo.
Amalungu abuyisa i-diamond l.00ct noma ngaphezulu kufanele ethule wonke amaphepha (i-IGI kanye / noma izitifiketi ze-GIA). Ukubuyiselwa kwemali kuwo wonke amawashi namadayimane 1.00ct noma ngaphezulu kuzogunyazwa lapho kuqinisekiswa kahle ubuqiniso bokuthengiswa kwempahla. Le nqubo ingadinga izinsuku zebhizinisi ezi-2-5.
Inqubomgomo yethu yokubuyisa ukushintsha kwengqondo ayisebenzi ekuthengweni kwe-bullion ngenxa yentengo nokuguquguquka kwemakethe. Ukuthengwa kwe-bullion kunalokho kuhlanganiswa yimigomo yesivumelwano sokuthenga esisayinwe ngesikhathi sokuthenga.
I-Particular oda kiosk nezinhlelo ezifakiwe zangokwezifiso
Imikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso ethengwa ngezinsiza ezikhethekile ze-oda noma okokufaka okwenziwe ngokwezifiso kwenziwa kumininingwane yamalungu ethu futhi inqubomgomo yethu yokubuya kwengqondo ayisebenzi kulokhu kuthenga.
Imikhiqizo yosizo lokuzwa
Inqubomgomo yethu yokubuyisa ukushintsha kwengqondo ayisebenzi emikhiqizweni yosizo lokuzwa esikhundleni sayo embozwe imigomo yesivumelwano sokuthenga esisayinwe ngesikhathi sokuthenga.
Inqubomgomo yethu yokubuyisa ushintsho lwengqondo ayikhawuli noma imaphi amalungelo akho ngaphansi koMthetho Wabathengi wase-Australia.
Ngokuzayo, i-Costco ingaqhubeka nokukhawulela inqubomgomo yayo yokubuyisa maqondana neminye imikhiqizo. Imikhawulo izokhonjiswa ngesikhathi sokuthenga.
Imikhiqizo Ngokwezifiso Ayikwazi Ukubuyiselwa
Njengomthetho ojwayelekile, izinto ezithengwe kuma-kioski akhethekile we-oda noma enziwe ngendlela ethile ngandlela thile awakwazi ukubuyiselwa.
Isibonelo, i-Costco Photograph Heart inikela ngezipho ezahlukahlukene zezithombe. Ngaphandle kwamakhadi wesiko nje, kunezinto ezinjengezinkomishi, amabhanela, amakhalenda, ama-rugs wokuphonsa nokunye ongafaka isithombe kuzo ukwenza ngezifiso. Izinto ezifana nalezi azikwazi ukubuyiselwa.
Iyini Inqubomgomo Yokubuya KweCostco Yezinto Zobuchwepheshe Nezinto Ezisetshenziswayo?
Nakhu uhlu lwama-elekthronikhi nezinto zikagesi ukuthi ungabuya kuphela ezinsukwini ezingama-90 ngemuva kokuthola into:
Amakhamera asemoyeni (ama-drones)
Amafoni weselula (imininingwane iyahluka ngesivumelwano senkampani yenethiwekhi)
Amafriji angaphezu kwe-10 cu. Ft.
Ama-microwaves angaphezu kobubanzi
Ama-washers kanye nama-dryer
Ayini amahora wokuvula we-Costco?
Izinqolobane zeCostco zivame ukusebenza ngoMsombuluko-NgoLwesihlanu, ngo-10 ekuseni kuya ku-8.30: 9.30, ngoMgqibelo ngo-6: 10 kuya ku-6 ntambama, nangeSonto ngehora le-XNUMX kuya ku-XNUMX ntambama. Sicela wazi ukuthi amahora wokuvula we-Costco angahluka ngamaholide omphakathi.
Sikuphi isitolo sami esiseduze seCostco?
Landela ngomkhondo isitolo sakho esiseduze seCostco usebenzisa okukusebenzisekayo locator ithuluzi. Mane nje ufake idolobha lakho, isifundazwe noma i-ZIP kubha yokusesha ukuze uthathe isinyathelo esisodwa eduze kwezindleko eziphezulu zezimpahla zansuku zonke.
Ngingakwazi Ukubuyisa Ugwayi Notshwala?
Ngokwenqubomgomo ebuyisa i-Costco, amandla okubuyisa iwayini, ubhiya nomoya kuyahluka ngomthetho wezwe – ofanayo nogwayi – ngakho-ke qiniseka ukuthi ubheka iklabhu yangakini ukuthola imininingwane.
See also what does that mean i put ketchup on my ketchup?
Kubiza malini i-Costco ngokuthumela?
Izimali zokuthumela ze-Costco nezikhathi ezibekwayo ziyahlukahluka kuye ngemikhiqizo oyikhethayo. Ngaphambi kokufaka i-oda lakho, hlola ithebhu ethi ‘Delivery and Returns’ ekhasini ngalinye lomkhiqizo ukuze uthole isikhathi esilinganiselwe sokulethwa kwento yakho. Ngemininingwane engaphezulu, hlola ifayela le- lokuthumela ikhasi kuwebhusayithi yeCostco.
ICostco inenqubomgomo yokubuyisa evumelana namakhasimende kakhulu. Kepha kunemikhawulo, ngakho-ke gcina lokho engqondweni futhi hlola iwebhusayithi ngaphambi kokuthi uye esitolo ukwenza ukubuya.
Uma kwenzeka kuvela impikiswano lapho uzama ukubuyisa okuthile, khumbula ukuthi yonke imbuyiselo icutshungulwa ngokubona komphathi. Futhi ukuqonde lokho, uma uzama ukusebenzisa kabi inqubomgomo, yona kungaholela ekubeni ubulungu bakho bukhanselwe!
Like Iyalayisha …
How to fix the issue reported by error code “0xc000001d”